Ny iPad Pro vaovao misy fakan-tsary 3D dia mety ho hita amin'ny volana martsa. Vaovao IPhone
Ny famokarana ny iPad Pro vaovao dia efa eo an-dàlam-panazavana raha ny fanazavany avy eo afovoany DigiTimes, noho izany dia afaka manohy ny tsaho izay manondro mivantana ny hevi-dehibe amin'ny volana martsa ho avy izao isika, indrindra ny Talata 31 amin'ny volana ho avy.
Mety ho ny Apple no nandefa ny iPad Pro vaovao amin'ity keynote ity? Eny, arak'izay lazain'izy ireo ao DigiTimes ho tanteraka izany. Ny fakantsary an'ny iPhone 11 Pro vaovao dia mety ho mpilalao fototra amin'ity iPad Pro vaovao ity ary ho tonga miaraka aminy ity ilay iPhone 9 vaovao izay heverina fa manana endrika mitovy amin'ny iPhone 8 ankehitriny fa miaraka amin'ny fanatsarana anatiny amin'ny lafiny fikirakirana.
Keynote izay mety hanana fiasa vaovao maro ary iray amin'izany ny iPad Pro
Ny sensor ToF dia hampiharina amin'ity iPad Pro heverina ho vaovao ity, izay ho tena ilaina handrefesana ny halavirana na ny refy. Ny marina dia milaza ny zava-drehetra fa ity iPad Pro vaovao ity dia hanana endrika mitovy amin'ny maodely ankehitriny, miaraka amin'ny seranan-tsambo USB C ary heverina fa misy fihatsarana amin'ny processeur miaraka amin'ny fanatsarana ireo fakan-tsary.
Ny iPad Pro dia tsy niova hatramin'ny 2018 ary antenaina fanavaozana tsy ho ela. Ao amin'ny DigiTimes dia manazava izy ireo fa ity maodely ity dia mety ho 12 santimetatra ary tsy miresaka momba ny fandrefesana ankehitriny izy ireo fa azo inoana fa diso kokoa amin'ny lahatsoratra io satria ny modely dia 11 sy 12,9 santimetatra avy, misalasala izahay fa hiova ireto haben'ny efijery ireto. Antenaina fa ny famokarana ireo iPad Pro vaovao ireo dia tsy araka ny antenaina noho ireo olana efa noresahina tetsy ambony, ny coronavirus dia mety hisy fiantraikany amin'ny famokarana ireo fitaovana ireo na dia misy aza ny momba ny singa 3 tapitrisa isam-bolana, ho hitantsika izay hitranga amin'ny farany izany. Ny hita fa mazava dia afaka manana iPad Pro vaovao afaka iray volana mahery isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny iPad Pro vaovao misy fakan-tsary 3D dia mety ho hita amin'ny volana martsa